Miyaad iga caawimi kartaa istaraatiijiyada sare ee SEO si ay ugu wanaagsanaadaan 2016?
Waa maxay habka saxda ah ee dib u qaabeynta ugu wanaagsan 2016, gaar ahaan dhinaca aragtida SEO? Waxaan rumaysanahay in hadda, habka ugu wanaagsan ee loo dhiso hufnaanta xiriirka inay si macquul ah u dhaqmaan si ay u ilaaliyaan waxkasta oo si fiican loo xakameyn karo oo si buuxda loo kontorooli karo. Qaar badan oo SEOs iyo khabiiro khabiir ah ayaa aaminsan in baadhitaanada soo noqnoqonayaan in laga reebo dhammaan istaraatijiyadaha dhismaha ee dibadda iyo isku xirnaanta ay fure u tahay in lagu wado SEO sida ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee dib u qabashada 2016. Waxaan loola jeedaa in aysan jirin istiraatiijiyad caalami ah oo ah "Search Engine Optimization" 100% oo la damaanad qaaday iyo natiijooyin kasta oo la saadaalin karo oo si macquul ah loo filayo heerka jagooyinkaaga raadinta wakhti dheer. Ka fogow fara xumaynta guud
Waa hagaag, waxa kaliya ee aan sameyn karno - waa in aan qiraa - waa in aan si cad u jiheynin isticmaalka hababka aan la isku hallayn karin oo aan la isku hallayn karin dhismaha isku xirka. Waxaan loola jeedaa inaad marwalba fikirto labo jeer ka hor inta aanad codsan dhammaanba kuwan cusub ee soo jiidashada ah ee SEO-ga, iyada oo aan loo eegin sida ay ugu rajo-gelinayaan inay eegaan jihada hore. Sidaa darteed, waad fiicnaan lahayd inaad "hal-abuurka" ku jirto, dabcan, haddii aad si firfircoon u dhaqdhaqaaqdo oo aad horey u heshay faham cad - dhab ahaan waxaad samaynayso iyo ujeedada gaarka ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaan aaminsanahay in ku dhawaad ​​qof kastaa uu ku raaxeysan karo natiijo la xaqiijiyay oo ku saabsan dhisida bogga internetka ama blog. Waxaan ula jeedaa in ay jiraan dhowr siyood oo dugsi-weyn iyo habab loo adeegsan karo si ay ugu fiicnaadaan 2016-ka, xitaa haddii aan la shaqaaleyn koox ka mid ah kooxda SEO-yada ah ama khibradaha websaydhga oo ku dhex jira warshadaha sanadaha. Hoos waxaan ku socdaa faahfaahin kooban oo ku saabsan habka ugu sareeya ee farsamada iyo aragti cad oo ah meesha laga bilaabayo dhismaha xiriiryo tayo sare leh si loo hagaajiyo SEO-gaaga miisaanka.
Qaybtaada Isgaadhsiinta Xiriirkaaga
Aan u qaadno si aan u helno - dhammaan xidhiidhada soo galaya waxaa loo qaybin karaa "laba" lakab. Si fudud u dhig, wax walbana waxay ku xiran tahay ilaha iyo waqtiga ugu habboon ee lagu bilaabi karo iyaga oo aan ka shakisanayn aragtida makiinadaha waaweyn ee raadinta sida Google laftiisa. Xaqiiqso inaad ka taxadartid xeeladaha ugu badan iyo ganaaxyada kuwaas oo si lama filaan ah hoos ugu dhigi kara qiimeyntaada - ku dhawaad ​​marnaba. Si aad u noqoto dhinaca ammaanka, waa inaad raacdaa tallaabooyinka saxda ah ee bilawga ah. Sidaa daraadeed, waxaan kugula talineynaa in aad kala soocdo fursadaha dhismahaaga xiriiriyaha, sida soo socota:
Maqaallada ugu muhiimsan ee Wiki.
Soo gudbinta buugaagta ee degmada.
liiska ganacsiga la xidhiidha ganacsiga.
Noocyo gaar ah oo toos ah si aad dib ugu noqotid boggagaaga ama blogkaaga (waxaan ku talin lahaa kuwa soo socda in ay isku dayaan marka hore iyo ugu horreyn - Ezinearticles. com, GoArrooyin. com, ama qodobbada. com).
Dhisidda warbaahinta bulshada iyadoo la soo bandhigayo qaabab ganacsi oo ku saabsan macaamiisha ugu caansan sida Facebook, Twitter, LinkedIn. (Tilmaam: waxaad isku dayi kartaa inaad isticmaasho FanPageRobot, oo ah qalab waxtar leh oo aad kuugu soo diri karto xidhiidhadaada warbaahinta bulshada ee ugu caansan oo ku dhawaad ​​isku dhow.
Boostada martida si loo helo dib u laabasho).
Faallooyinka ku saabsan boodhka ku haboon.
Ka qayb galka wada hadalka kulul ee ku saabsan barta internetka, blogyada, iyo bogagga loogu talagalay Su'aalaha & Jawaabta. (Tilmaam: ka hor inta kale, waxaan ku taliney inaan isku dayo in dib u dhiska dib loo dhajiyo Quora iyo LinkedIn Jawaabaha).
Suuq-geynta fiidiyowga ee YouTube ee adduunka labaad ee booqday boggaan waa in aan waligood la dhicin. Ha ka waaban inaad bilowdo fiidiyowgaaga fiidiyowga oo kusheegto suuq-geyn aad u firfircoon oo internetka ah oo leh dhiirigelinta magaca calaamadeynta, iyada oo la jaanqaadaysa in badan oo xiriiriyaal qiimo leh isla wakhtigaas. (Tilmaam: waxaad heli kartaa lamaane isla markiiba abuuray links - kaliya buuxinta qaybaha ugu muhiimsan ee profile aad heli karto si ay dib ugu noqoto backlinks leh website-kaaga ama blog default) Source .